Iwo akanakisa edhiyo edhisheni eLinux | Linux Vakapindwa muropa
Makore apfuura nyika ye graphic design uye zvese zvine hukama ne multimedia kugadzirisa yaitongwa zvizere neApple, asi mumakore achangopfuura zvishandiso zve free software Vakaita nhanho dzinoshamisa mukuwana nzvimbo inowedzera kukosha muzvinhu zvese zvine chekuita nemabasa aya. Ruoko urwu rwakabatana nemaapplication ayo nhasi ari mabenchmarks akadai se GIMP, Blender kana Audacity, ndosaka tichida kukuratidza mamwe akanakisa edhiyo edhisheni eLinux.
Iyo irondedzero iyo isingatore danho uye mhedziso, asi kune akawanda maturusi anogona kusiiwa kubva mairi asi akakosha, uye ndezvekuti, sekuziva kwedu, yemahara software inopa isingaverengeke nhamba yeanoshandisa anokwanisa kugutsa vashandisi vese. Ngatione ipapo, ndeapi mamwe edhiyo edhisheni anomira kunze muLinux nyika:
Audacity: Zviri nezve a odhiyo edhisheni iyo pamusoro pekuve yakavhurwa sosi ndeye multiplatform, ine shanduro dzeLinux, Windows uye Mac OS X iyo iyo inowanikwa kune yakakura hombe yevashandisi. Simba rayo nderemberi asi rakachena uye risina kumisikidzwa interface, iine kugona kuwedzera matraki muzvikamu uye nekuzvigadzirisa panguva imwe chete kana zvakazvimiririra, kana kusanganisa akasiyana ekuteedzera nekuburitsa. Chii chimwe, Audacity inotibvumidza kurekodha odhiyo ine yakaderera kwazvo latency uye muyero wekusampura unosvika ku384.000 hz kana Hardware ichikwanisa. Kune zvakare srutsigiro rwekugadzirisa izwi uye kubvisa static ruzha, kuridza muridzo, kana kumwe kurira kwepashure ruzha, chinja mafrifiti nekuenzana, mafirita eFFT uye kuwedzera mabass kana kugadzirisa huwandu hwehoriyamu, uye chakakosha uye chakakosha chiitiko ndechekuti zvirinani zvese maficha akatsigirwa mune ino turu anowanikwa kuburikidza nekhibhodi nzira pfupi saka zvinogona kutaurwa kuti kuwanika zvakare chiratidzo.
kwave- Iyo ine simba odhiyo edhita yevateveri veiyo KD desktopE, iyo isiri yepamberi senge yapfuura asi inopa mukana wekugadzirisa mafaera ekuteerera nerutsigiro rwemazhinji matraki. Inopawo mabasa ekucheka, kuteedzera uye kunama, kugadzirisa uye kugadzirisa pamatanho akasiyana uye kunyora chiratidzo, uye kurekodha kana kutamba kuburikidza neALSA kana OSS; tinogona kuunza nekuburitsa mafaera muMP3, Ogg / Vorbis kana fomati yeFLAC, uye mukana wekuongorora maturusi akadai saSonogram.
LMMS: zita rake rizere Linux Multimedia Studio, uye iri chishandiso chemberi chevaimbi nevaparidzi vemultimedia. Nechikonzero ichi, chimiro chayo chinomiririra mune imwe pfungwa yeyekunyaradza, ine vhoriyamu kana zviyero zvinodzora zvinoteedzana kunge zvinotsvedza senge mune chaicho Hardware, kunyangwe pamwe chimwe chezvinhu zvakandishamisa zvikuru ndechekuti Freeboy, plugin inotendera isu kuti tishande ne odhiyo kuti zvinzwika sekunge tiri kushandisa inotakurika GameBoy koni. Asi mukuwedzera LMMS inopa iyo rwiyo kuumbwa kubva mukuteedzana, 64-chiteshi musanganisi, akazvitsaurira mupepeti wekuteedzera mutinhimira uye mabass, muunganidzwa wezviridzwa uye mhedzisiro, Piano Roll uye kuzere kuenderana nemhando dzakasiyana senge SoundFont2 (SF2), VST (i), LADSPA, GUS uye MIDI.
Jokosher: Hazvisi zvese muhupenyu kuita kwehunyanzvi senge yapfuura, LMMS, asi zvinonakidza zvakare kupa maturusi ane nhanho yakanaka yekuita uye neyakareruka interface, ine maturusi anotibvumidza kufamba mukati meiyo track uye mukana wekusanganisa uchishandisa slider. Kana zvasvika pakusvika pakushanda pamimhanzi yedu, paJokosher (zvichibva paGTK +) tinayo kupinza uye kutumira kunze kwenyika odhiyo mumafomati makuru: MP3, Ogg Vorbis, FLAC, WAV uye nevamwe vese vanotsigirwa neGStreamer, uye isu tinokwanisa kuwedzera zviridzwa kuchirongwa, icho chinogona kutamiswa nekukurumidza uye zvakapusa uye tinogona zvakare kutumidza kuravira.
Isu taida kuratidza maturusi mana, maviri akareruka uye maviri epamberi, kuitira kuti vashandisi vese vave nemukana wekusarudza iyo inonyatsoenderana nezvavanoda, pachinzvimbo chekutarisa kune vane simba chete nekuti kune vashandisi vazhinji Zvimwe zvekushandisa zvakakosha zvinowanzo pane kukwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » Akanakisa Edhiyo Edhita eLinux
Pindura ku dmnmsc
AC Colon akadaro
Ndatenda nekuisa. Ini ndinoshandisa Audacity kazhinji uye inobatsira kwazvo. YaJokosher neLMMS ndakatonzwa, uye zvinoita kwandiri kuti ndakambovaedza pane imwe nguva, asi parizvino handizvishandise. Iwo zvirokwazvo anokosha maturusi kune avo vanoda iko kushanda kwavanopa. Kwave itsva kwandiri, handisati ndambonzwa nezvake.
Pane imwe yakanyorwa, kune zvakare Ardor iyo, inopfuura odhiyo edhita, iri DAW (Dhijitaru Audio Wordkstation). Zvakajairika pakati pevaimbi, kunyanya avo vari kutsvaga imwe nzira yeProTools. Vaya vari kutsvaga odhiyo "mupepeti" ane hunyanzvi hukuru uye mikana vanogona kuwana Ardor kuve chirongwa chinokwanisa kwazvo.
Pindura AC Colón
Zvakanakisisa pane zvese zvinoshaikwa, zvirinani kwandiri, Ardor
chii chakaitika kune ardor 3? inorova vese avo !!!! sezvo vasina kunyorwa zvakawanda vasati vanyora katsamba.
Pablo gabriel lopez akadaro
Ehe, pasina kupokana, Ardor asipo, chishamiso cheSL uye nyanzvi kwazvo muGNU / Linux
Pindura Pablo Gabriel Lopez
Kwave haitsigire MP3
Pindura kuna waxfalcon
Ardor chikara, chakatsiga, chinoshanduka-chinja, chinoshanda zvakanyanya, uye chiri kuita kusimudzira kunoshamisa mumakore apfuura. Ivo vatove pa4.7
Pindura kune albertotrabajos
Asi iyo inodya iyo yasara nekure ndeyeBitwig Studio, iyo isiri chete odhiyo edhitaivhi, kana iri yemahara software, kana isingadhuri, asi ndiyo yega DAW iri inyanzvi uye yakanangana nehunyanzvi basa neraudio.
ndezve YouTube chiteshi
Wifislax 4.10 yakatoburitswa kare
Iyo nyowani chirongwa cheiyo DNIe: mipiro kune yemahara software homelands